Zimbabwe nurses end three-month pay strike
Nurses break for lunch at a local government hospital in Harare, Zimbabwe. File picture: Philimon Bulawayo/Reuters
By Reuters Sep 10, 2020
Harare - Zimbabwe's biggest nurses union said on Wednesday it was encouraging its members to end a pay strike which started in June and which forced major hospitals to turn away patients at a time the country is fighting the coronavirus pandemic.
The Zimbabwe Nurses Association (ZINA), which has more than 16 000 members, called for the strike to force President Emmerson Mnanagwa's government to pay US dollar salaries, but authorities say they are unable to do so.
7 babies stillborn at Zimbabwe hospital in one night as nurses strike over working conditions
PICS: Zimbabwe police arrest nurses protesting over pay
WATCH: Zimbabwe needs R70m to prepare for coronavirus outbreak
Dongo said the lowest paid nurse earned 6 000 Zimbabwe dollars (around R275) in salary and allowances monthly. The state statistical agency says an average family of five needs at least 15 573 Zimbabwe dollars (R694) to be not considered poor.